Posted by xol2 on July 10, 2010 · Leave a Comment Barkhad M. Kaariye – Q. 1aad
Tartan kasta oo la galo laba jid midkood ayay mutaan tartamayaashu, qayb guulaysata iyo garab laga guulaysto, hase ahaatee, macnuhu kuma jiro in la kala badiyo, waxayse xikmaddu ku duugan tahay in dhinaca laga guulaystay uu aqbalo. Inkasta oo muddadeedii dhaaftay, haddana ugub kuma aha Somaliland in tartan Siyaasadeed saldhiggiisu yahay hoggaaminta dalku ka dhaco, hase yeeshee, hore ayay Umadda Somaliland saacado badan ugu soo dul-qaateen Cadceed kulkeedu sarreeyo, isla markaana ay codkooda u soo dhiibteen. Waxase Doorashadii dhawaan dalka ka dhacday ay kaga geddisan tahay, Shacabka Somaliland oo yiddidiilo xooggan ku qaba in ay horseed u noqon karto aqoonsi Caalami ah oo ay Beesha Caalamku ku abaal-mariso Somaliland.
In Koox dad ah lagu qaabilo Munaasibad, lana shaaciyo in ay ka baxeen Xisbi, kuna biireen Xisbiga Xafladda u sameeyay, ayaa ka mid ahayd tabaha lagu sawirayay in taageerada Xisbigaasi korodhay. Taas oo socotay ilaa horraantii Ololaha Doorashada. Muddo badan oo Carrabka dadku u badnayd kelmadda ISBEDEL ka dib, Arooryo hore, 26 June 2010 ayay dadweynaha reer Somaliland guud ahaan dalka uga dareereen si ay codkooda u dhiibtaan Doorashada Madaxtooyada, isla markaana tirinta codadkaas natiijadii ka soo baxday ay Guddida Doorashooyinku ku dhawaaqeen in uu ku guulaysteen Murashaxiintii Jagada Madaxweynaha iyo ku-xigeenka ee Xisbiga KULMIYE, taas oo ay soo dhaweeyeen tartamayaashii kale ee Murashaxiinta guulaystay kula loollamayay xilalkaas. Tartanka siyaasadeed waa mid ku caano-maalay in siyaasiga tartamayaa ku talo-galo in laga guulaysto iyo in uu guulaystaba labadaba, taas oo sahasha in la maro Jidka wanaagga huwan ee ay qaadeen siyaasiyiintii la tartamaysay Madaxweynaha cusub ee la doortay oo ah in laysu hambalyeeyo.
Filed under qoraa ← “Reer Galbeedku miyay curyaaminayaan fursadda wanaagsan ee dimuquraadiyada Somaliland?” –